अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक अचानक स्थगित ! - Everest Dainik - News from Nepal
अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक अचानक स्थगित !
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अन्तिम समयमा अाएर स्थगित गरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका मुद्दा साझा रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेका बेला आजका लागि तोकिएको बैठक अचानक स्थगित गरिएको हो ।
पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रदेश सरकारका साझा समस्या र मुद्दालाई परिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस वरियताक्रम विवाद र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति अन्योलले क्याबिनेट ठप्प
बैठकले केन्द्र सरकारप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि न्यूनीकरण गर्ने आस गरिएको थियो । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना सक्रिय पार्न केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले लगाउँदै अाएकना छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको बताए । बैठकमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवहरूलाई खबर गइसकेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी भई समस्या सुनाउने योजनामा थिए । अधिकांश मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस के के भयो मन्त्रीपरिषद्को निर्णय?
मुख्यमन्त्री भेलाले परिषद् बैठक नियमित बोलाउनुपर्ने, संघ र प्रदेशबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सुदृढ सचिवालय गठन गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्ताव परिषद् सचिवालयबाट समयमै सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियाे ।